1 Makoronike 29:1-30
29 Zvino mambo Dhavhidhi akati kuungano yose:+ “Mwanakomana wangu Soromoni, uyo asarudzwa naMwari,+ muduku+ uye haana simba, asi basa iguru; nokuti chivako ichi chikuru hachisi chomunhu,+ asi ndechaJehovha Mwari. 2 Zvino maererano nesimba rangu rose+ ndakagadzirira+ imba yaMwari wangu ndarama+ yokugadzirisa zvinhu zvendarama, nesirivha yokugadzirisa zvinhu zvesirivha, nemhangura yokugadzirisa zvinhu zvemhangura, simbi+ yokugadzirisa zvinhu zvesimbi, nematanda+ okugadzirisa zvinhu zvematanda; matombo eonikisi,+ nematombo anofanira kuiswa pachishandiswa dhaka rakasimba, nemabwe okunakisa nawo, nematombo ose anokosha, nematombo earabhasta mazhinji. 3 Zvandinofarira+ imba yaMwari wangu, pachine pfuma yangu chaiyo,+ ndarama nesirivha; ndinozvipa kuimba yaMwari wangu kuwedzera kune zvose zvandakagadzirira imba tsvene:+ 4 matarenda endarama zviuru zvitatu, endarama yokuOfiri,+ nematarenda esirivha yakanatswa zviuru zvinomwe, yokunamisa madziro edzimba; 5 endarama yokugadzirisa zvinhu zvendarama, neesirivha yokugadzirisa zvinhu zvesirivha uye nokuda kwebasa rose rinoitwa nemaoko emhizha. Ndiani anozvipira kuzadza ruoko rwake nechipo chaJehovha nhasi?”+ 6 Zvino machinda+ edzimba dzemadzitateguru+ nemachinda+ emadzinza aIsraeri nevakuru vezviuru+ nevemazana+ nevakuru vebasa+ ramambo vakazvipira. 7 Naizvozvo vakapa ndarama yaikosha matarenda zviuru zvishanu, nemadhariki zviuru gumi, nesirivha yaikosha matarenda zviuru gumi, nemhangura yaikosha matarenda zviuru gumi nezvisere, nesimbi yaikosha matarenda zviuru zana nokuda kwebasa reimba yaMwari wechokwadi.+ 8 Matombo api neapi aiva nevanhu vapi nevapi vakaaisa kupfuma yeimba yaJehovha yaitarisirwa naJehieri+ muGeshoni.+ 9 Vanhu vakafara nokupa zvinhu nokuzvidira kwavakaita,+ nokuti vakapa Jehovha zvinhu nokuzvidira, nomwoyo wakakwana; kunyange mambo Dhavhidhi akafara nomufaro mukuru.+ 10 Naizvozvo Dhavhidhi akarumbidza+ Jehovha ungano yose ichizviona,+ Dhavhidhi akati: “Haiwa Jehovha Mwari waIsraeri+ baba vedu, rumbidzwai+ narini kusvikira narini. 11 Haiwa Jehovha, ukuru+ nesimba+ norunako+ nouchangamire+ nokukudzwa+ ndezvenyu; nokuti zvinhu zvose zviri kumatenga nepanyika ndezvenyu.+ Haiwa Jehovha, umambo ndohwenyu,+ Imi muri kuzviisawo pamusoro kuti muve mukuru wezvose.+ 12 Pfuma+ nokukudzwa+ zviripo nokuda kwenyu, munodzora+ zvinhu zvose; simba+ noukuru zviri muruoko rwenyu,+ uye muruoko rwenyu mune simba rokuita zvinhu zvikuru+ nokupa vose simba.+ 13 Zvino, haiwa Mwari wedu, tiri kukuongai+ nokurumbidza+ zita renyu rakanaka.+ 14 “Asi ini ndini ani+ uye vanhu vangu ndivanaani kuti tive nesimba rokupa nokuzvidira sezvataita?+ Nokuti zvose zvinobva kwamuri,+ uye takupai zvakabva muruoko rwenyu. 15 Nokuti tiri vatorwa pamberi penyu uye vanobva kune imwe nyika+ sezvakanga zvakaita madzitateguru edu ose. Mazuva edu panyika akaita somumvuri+ uye hapana tariro. 16 Haiwa Jehovha Mwari wedu, izvi zvose zvizhinji zvatakagadzirira kuti tikuvakirei imba yezita renyu dzvene, zvakabva muruoko rwenyu, uye zvose ndezvenyu.+ 17 Haiwa Mwari wangu, ndinonyatsoziva kuti ndimi muongorori womwoyo,+ uye kuti munofarira kururama.+ Ini ndapa zvinhu zvose izvi nokuzvidira kwangu nomwoyo wangu wakarurama, uye ndafara kuona vanhu venyu vari pano vachikupai nokuzvidira. 18 Haiwa Jehovha Mwari wemadzitateguru edu Abrahamu, Isaka naIsraeri,+ chengetai izvi nokusingagumi sezvinodiwa nepfungwa dzemwoyo yevanhu venyu,+ mutungamirire mwoyo yavo kwamuri.+ 19 Ipai mwanakomana wangu Soromoni mwoyo wakakwana+ kuti achengete mirayiro yenyu,+ zvipupuriro zvenyu+ nemirau yenyu,+ kuti aite zvose, uye avake chivako chikuru+ chandakagadzirira.”+ 20 Dhavhidhi akati kuungano yose:+ “Zvino rumbidzai+ Jehovha Mwari wenyu.” Ungano yose yakarumbidza Jehovha Mwari wemadzitateguru avo, vakakotama,+ vakagwadamira+ Jehovha namambo. 21 Vakaramba vachibayira+ zvibayiro kuna Jehovha nokupa zvinopiwa zvinopiswa+ kuna Jehovha zuva rakatevera zuva iroro, zvaiti, nzombe duku chiuru, makondohwe chiuru, makwayana makono chiuru nezvinopiwa zvazvo zvinonwiwa,+ nezvibayiro zvizhinji nokuda kwevaIsraeri vose.+ 22 Vakaramba vachidya uye vachinwa pamberi paJehovha zuva iroro vachifara kwazvo;+ vakagadza Soromoni mwanakomana waDhavhidhi kechipiri kuti ave mambo,+ vakamuzodza nokuda kwaJehovha kuti ave mutungamiriri+ uyewo Zadhoki+ kuti ave mupristi. 23 Soromoni akagara pachigaro choumambo chaJehovha+ ari mambo panzvimbo yababa vake Dhavhidhi, akabudirira,+ uye vaIsraeri vose vaimuteerera. 24 Machinda+ ose nevarume vaiva nesimba+ nevanakomana vose vaMambo Dhavhidhi,+ vakazviisa pasi pamambo Soromoni. 25 Jehovha akaramba achikudza Soromoni kwazvo+ vaIsraeri vose vachizviona uye akamupa rukudzo rukuru rusina kumbova namambo chero upi zvake waIsraeri akamutangira.+ 26 Zvino Dhavhidhi mwanakomana waJese, akatonga vaIsraeri vose;+ 27 mazuva aakatonga Israeri aiva makore makumi mana.+ Akatonga kwemakore manomwe ari muHebroni,+ uye akatonga kwemakore makumi matatu nematatu ari muJerusarema.+ 28 Iye akazofa anyatsokwegura,+ agutswa nemazuva, pfuma+ nokukudzwa;+ uye mwanakomana wake Soromoni akatanga kutonga panzvimbo pake.+ 29 Zvimwe zvakaitwa namambo Dhavhidhi, zvokutanga nezvokupedzisira, zvakanyorwa mumashoko omuoni+ Samueri nomumashoko omuprofita Natani+ nomumashoko omuoni Gadhi,+ 30 pamwe chete nezvoumambo hwake hwose nesimba rake nezvakanga zvaitika+ kwaari nokuvaIsraeri nokuumambo hwose hwenyika dzacho.+